Ny tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny Royal Rumble 2017 - Wwe
Ny tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny Royal Rumble 2017
Ny hetsika faha-30 isan-taona an'ny Royal Rumble dia angamba ny karama farany nandrasana isaky ny fahatsiarovana.
Miaraka amin'ny lisitra kintana misy kintana amin'ny lalao, tantara an-tsehatra amin'ny angano, ary fientanam-po amin'ny fijerena ny famantaranandron'ny famoahana hatramin'ny zero, hanamarihana ny fahatongavan'ilay mpandray anjara manaraka, raharaha nampientam-po tamin'ny lafiny maro io.
izay nilalao bella tamin'ny takariva iny
Mandritra izany fotoana izany, na dia misy olona an-tapitrisany aza mitady hanatratra ilay hetsika, tsy afaka tsy hieritreritra izahay fa maro no diso fanantenana tamin'ny fanapahan-kevitry ny famandrihana sasany avy amin'ny WWE. Raha tsy misy resaka intsony dia andao jerena indray ity hetsika ity ary avereno jerena ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra amin'ny Royal Rumble 2017.
# 1 ratsy indrindra: isa very toerana 30 / antony mety ho ao ambadiky ny hetsika
Hatraiza tokoa no hanenjehan'ny lehilahy an'ity tendantsika ity?
Rehefa niditra ny laharana faha-29 i Undertaker, ary mbola tsy naseho ny toerana faha-30 dia anarana maro no voamarina. Ny anarana toa an'i Kenny Omega, Kurt Angle ary heck, na ny Samoa Joe an'ny NXT aza dia natsipy. Iza no niseho tamin'ny farany?
ahoana ny fomba hitenenana amin'ny ankizivavy tianao fa tsy manimba ny fisakaizana
Ilay lehilahy efa nohomboan'ny mpankafy ady 50000+ niaraka, tsy ela akory izay. Roman Reigns dia nanana lalao nifanandrinana tamin'i Kevin Owens tao anaty karatra ambany, saingy tena mieritreritra izahay fa fanapahan-kevitry ny famandrihana mampiahiahy avy amin'ny WWE io.
Ny fanapahan-kevitra hampiditra azy amin'ny lalao angamba dia ny fananganana programa Undertaker vs Roman Reigns, ary tsy azonay antoka fa tena faly amin'izany izahay. Mampiaka-peo ny fihetsem-pon'ny vahoaka niantsoantso hoe 'omby ity ***'.
ny fomba converstation foana ny handeha
inona no ijoroan'ny miaramila bts
mandra-pahoviana ny lehilahy vao mifankatia
wwe nomeraon-telefaona wwe superstars
hanambady olona izay tia anao kokoa